Cnc kutendeuka basa - OUZHAN DZAISHANDISWA (SHANGHAI) CO., LTD
Tsika Precision CNC Turning Lathe Service-OEM / ODM China CNC Turning Zvigadzirwa Mugadziri
Ouzhan inyanzvi & neruzivo rwekuita CNC kutendeuka masevhisi mutengesi, mugadziri, mutengesi uye mutengesi muChina, anga ari nyanzvi pakupa nyanzvi OEM / ODM CNC yekuchinja masevhisi zvemhando yepamusoro asi zvakachipa CNC kutendeuka zvikamu, CNC lathe zvikamukana yakakwira chaiyo michina yezvinhu zvine michina yepamusoro uye hunyanzvi hwekushandisa mashandiro. Zvakadai sezvikamu zvemuoko, zvidimbu zveplate, shaft zvikamu, ma washers, bolts, pipe fittings, nezvimwe.
Yedu yepamberi CNC Kutendeukanzvimbo uye zvetsika masevhisi anotsigira akasiyana siyana zvigadzirwa, anosanganisira mhangura, simbi isina simbi, kabhoni simbi, aluminium, titanium uye mapurasitiki. Tichagara tichironga yakanyatsokodzera matanho ekushanduka, muchikonzero chekuzadzisa zvese zvaunoda, tinogona kazhinji kudzikisa mutengo wako kusvika padanho rakakura. Tsika yeduCnc machine mabasa gara uine chokwadi chekuti vatengi vedu vakagamuchira mhando yepamusoro CNC yakashandura zvikamu uye masevhisi anofungisisa.
Ouzhan Precision CNC Turning Kugona uye Zvimiro:
OuZhan anokwanisa kupa mutengo-inoshanda CNC wekutendeuka lathe masevhisi uye epamusoro nemhando yepamusoro zvigadzirwa zveiyo yakawanda nhamba yemapurojekiti.
- Tsigira yakaderera, yepakati kusvika yakakwira vhoriyamu batch kugadzirwa
- Rapid prototyping uye magumo-kushandisa kugadzira
-Kukwirisa kwehunyanzvi, kukwirisa kugadzirwa uye nekuvimbika kwakanyanya
- Hwakasiyana hwakawanda hwesarudzo yesimbi nemapurasitiki zvinhu
- Yakasimba kugadzirwa uye nekukurumidza kutumira nguva
- Anodiwa apedza uye akasimba tolerances anowanikwa
Nei Uchisarudza Ouzhan CNC Turning Services
Yedu yepakati yekugadzira michina inotengeswa kubva kuSwitzerland neJapan, iyo inogona kupa vatengi nemitengo yakachipa yeCCC yekuchinja mitengo.
Pamusoro pekushanduka, isu tinoshanda mukugaya, lathing, kuchera, CNC kutendeuka uye yekugaya masevhisi, kuti ugone kuwana yakakura sarudzo yeCNC yemashini zvikamu kubva kuchikwata chedu chakavimbika.
Isu tine mainjiniya gumi munzvimbo yedu yeR&D, vese vari vanachiremba kana mapurofesa kubva kuYunivhesiti yeSainzi neTekinoroji yeChina. Tinogona kupa yakanyanya nyanzvi CNC dhizaini uye CNC enjiniya masevhisi.
Tine hunyanzvi hwehunhu hwekuongorora vashandi uye zvigadzirwa, zvinoenderana nematanho epasi rese kune zvigadzirwa zvako kuti uedze, uye ubudise yakadzama bvunzo mushumo wevatengi 'CNC michina zvikamu.
Yakagadziriswa saizi uye maumbirwo aripo. Welcome to share your 2D or 3D vanodhirowa yenyu CNC machine zvikamu nesu, ngatishandei pamwechete kuti hupenyu huwedzere kugadzira.
Ouzhan CNC michina chinyorwa
5-akabatana azvikuya centre
4-akabatana azvikuya centre
3-akabatana azvikuya centre
Pakati isina grinder
Keyway broaching muchina
Laser rokuisa chiratidzo pakati
Chii Chinonzi CNC Turning Service & Mashandiro anoita CNC Ekushandura
CNC kutendeukainogadzira zvikamu zvine cylindrical maficha nekubvisa zvinhu kubva pasimbi kana mapurasitiki matanda vachishandisa vanocheka, epakati drills kana mhenyu ekushandisa. CNC Turning inoshandisa michina-inodzorwa michina kugadzira imwe yekupedzisira chigadzirwa. Maitiro acho anoshandisa imwechete-poindi yekucheka chishandiso inoisa inoenderana neyezvinhu zvekucheka. Izvo zvinhu zvinotenderedzwa pakushandura kumhanya uye chishandiso chinocheka chichiyambuka kugadzira cylindrical kutemwa nezviyero chaizvo. Iyo inoshandiswa kugadzira yakatenderera kana tubularshares kubva pazvinhu zvakakura zvezvinhu. Iyo inoitwa otomatiki maitiro uye kumhanya kunogona kuve zvigadziriso zvekunyatso kurongeka pane kutenderedza lathe neruoko.
Kana zvasvika kune iyo CNC yekuchinja maitiro, iyo inobvisa nzira yekugadzira inowanzoitwa pane CNC lathe kana kutendeuka nzvimbo. Pamberi pekucheka, G-kodhi uye wekushandura muchina unofanirwa kuve wakagadzirirwa, wozochengetedza isina chinhu bhaa rezvinhu mune chuck yechokurukisa, iyo chuck inobata chidimbu munzvimbo iyo chokurukisa chinotenderera. With chokurukisa Muruoko rwake kune dzimwe kumhanya, mira chete-pfungwa CNC wekutema aricheke achafamba pamusoro Linear nzira kuti kufanana kuti akabatana kutenderera uye kubvisa zvakawandisa zvinhu, kuderedza dhayamita of chinogumbura, taura divi uye kuumba kumeso kumugumo, kuti tora yekupedzisira tsika CNC yakachinja zvikamu neyaida kutaurwa.
CNC Turning Zvishandiso - Zvishandiso Zvinoshandiswa zveCCN Lathes
Nyoro, chiwanikwa & Chishandiso simbi
Simbi yakapfava 1018
Simbi yakapfava 1045
Simbi yakapfava A36
Zvinhu zvenaironi 6
Chiwanikwa simbi 4140
Titanium Giredhi 1
Chiwanikwa simbi 4340
Titanium Giredhi 2
Chishandiso simbi O1
Chishandiso simbi A2
Chishandiso simbi A3
Chishandiso simbi D2
Chishandiso simbi S7
Chishandiso simbi H13
Ouzhan CNC hwokugaya hwakabvira Apedza